Vaovao - Mampiofana ny kolotsaina orinasa ho an'ny mpiasa i Lianteng
Hatramin'ny nijoroany folo taona mahery lasa izay, ny milina famonosana Lianteng dia tsy vitan'ny hoe nifantoka tamin'ny fampandrosoana sy ny famokarana milina fonosana isan-karazany ihany, fa koa nandinika tsara hanatsara ny fahatakarana ny kolontsain'ny mpiasa.
Lianteng dia nanitrikitrika hatrany fa ny olona dia ny laharam-pahamehana amin'ny famokarana, izay tsy ny vatan'ny orinasa ihany, fa koa ny fototry ny fitantanana orinasa.Lianteng milina dia sekoly iray avy amin'ny foto-kevitry ny talenta amin'ny "fananganana orinasa sy fanabeazana ny olona voalohany ". Izy io koa dia ny fifandraisana ara-kolontsaina amin'ny" trano "mafana, izay mametraka ny olona ho eo amin'ny toerana voalohany amin'ny fitantanana orinasa. Mifantoka amin'ny hevitra hanompoana ny mpiasa amin'ny fo manontolo, ny orinasa dia manatanteraka asa fananganana kolontsaina, miezaka mamorona tontolo ara-kolontsaina feno fahavelomana anatiny, firaisankina matanjaka, ary fahatokisana sy fanohanan'ny mpanjifa ivelany.
Mandritra izany fotoana izany dia manantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny fananganana fanarahan-dalàna ny orinasa i Lianteng. Ny fenitra no "lalàna" an'ny orinasa, ny hetsika rehetra ataon'ny orinasa dia tokony hatao ao anatin'ny fenitry ny fenitra, "fenitra voalohany, tale jeneraly faharoa fenitra alohan'ny hitovizan'ny tsirairay ", ity no fenitra tsy miova amin'ny fananganana fanamarinana ny lianteng. Mihevitra ny filoha fa ny fanoloana" fitsipika ataon'ny olona "miaraka amin'ny" fitsipika amin'ny lalàna "dia mety handresy ny finiavana sy ny fihetsem-po manokana. fampandrosoana. nametraka andiana fenitra ara-tsiansa sy ara-dalàna hitantanana ny orinasa, manara-penitra ny fitondran-tenan'ireo mpiasa. Izany dia manome toky mba hiantohana ny fampandrosoana maharitra sy maharitra ny orinasa.
Ny teboka farany amin'ny kolotsaina orinasa dia ny fampivelarana ny orinasa manana kalitao. Nanaiky i Lianteng fa ny kalitao no ain'ny orinasa ary ny vokatra dia maneho ny toetra amam-panahy. Tsy mieritreritra ny fomba hiatrehana sy handresy ny mpanohitra azy ny olona fa kosa hifantoka amin'ny fomba hitarihana ny mpifaninana rehetra amin'ny resaka kalitaon'ny vokatra. Satria "Lianteng "Mino ny olona fa amin'ny toekarena eo amin'ny tsena dia hisy foana ny mpifaninana, ny fitantanana tsara ihany, ny fanatsarana ny atin'ny teknolojia vokatra no fanalahidy hifehezana ny tsena. Ny orinasa Lianteng dia manaraka hatrany ny politikam-pahaizana momba ny kalitaon'ny" fanomezana entana avo lenta ho an'ny fiarahamonina ", Miezaka ny ho tafavoaka velona amin'ny kalitao, miezaka ho amin'ny fampandrosoana amin'ny lazany, ary mampitombo hatrany ny fampiasam-bola amin'ny fanovana teknolojia sy ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny vokatra vaovao. Eritrereto ny kalitao raha velona ny orinasa. Ny vato fehizoro amin'ny fampandrosoana ary ny lakile volamena.
Mino aho fa raha mbola manaraka ny kolotsaina orinasa hatrany izahay dia afaka mamorona masinina fonosana tsara kokoa ho anao i Lianteng ary hitondra serivisy tonga lafatra kokoa ho an'ny mpanjifanay.
Fotoana fandefasana: Jul-24-2020